CANABKA PLAM FLAMINGO: SHARAXAAD KALA DUWAN, ASTAAMAHA, MUUQAALADA BEERASHADA, SAWIR - BEERTA
Canab - dhaqan leh taariikh dheer iyo qani ah. Winegrowers waxay barteen sidii ay u kori lahaayeen wax soo saarka sare iyo waxay soo saartey siyaabo badan oo loo hirgeliyo oo loo kaydiyo. Wax kasta oo aad ku dhihi karto, kooxo canab ah waa quruxda miis kasta iyo macmacaanka ugu macquulsan.
Qorraxda ayaa wax walba ka bogsata, kooxda reer Spain waxay yiraahdaan, canab caano. Lacagta ugu sarraysa, dabcan, laga bilaabo isticmaalka canab cusub. Waxaa muddo dheer la ogaa, iyo noocyo badan oo leh dhadhan wanaagsan, qaniinyo qurux badan iyo nolol shelf oo dheer.
Waxaa jira waxyaabo badan oo laga dooran karo. Hase yeeshee ma jiraan wax xadidan oo lagu kalsoonaan karo, noocyada cusubna waxay u muuqdaan kuwo ku faraxsan ra'yiga oo leh qaabab kala duwan, midab, cabbir, dhadhan.
Cinabta Flamingo Pink: sharaxaad kala duwan
Caleemaha canabka ah ee flamingo waa miiska kala duwan ee Bisaylka dhexdhexaad ah. Berry waa shaki ku jiro casaan - flamingo waa qaab isku dhafan, weyn, soo ururiyey burushyada cirridka ah, ama halkii, kooxo, sababtoo ah waxay ka kooban tahay 500 ilaa 1000 garaam.
Meelaha miiska leh celceliska qaangaadhka waxaa kaloo ka mid ah Korinka Ruush, Julian iyo Muromets.
Dhadhanka midhaha wuxuu u dhigmaa muuqaalka - qurux badan. Dhadhanka canab, haddii uusan jirin wax dhadhan shisheeye ah, waxaa lagu magacaabaa sahlan. Flamingo wuxuu leeyahay dhadhan fiican oo fudud.
Wax-soo-saarka waa mid sare oo deggan.
Kuurku waa mid dhexdhexaad ah, caleemaha miraha dufanka leh 60-70%, nooca ubaxa haweenka, pollinal buuxa. Warshadu waxay u dulqaadanaysaa dhaxan ilaa 23 digrii. Cadaadiska cudurku waa celcelis ahaan.
Parisian, Asya iyo Nadezhda Rannaya waxay sidoo kale leeyihiin milkiilayaasha haweenka.
Sawirrada canabka Flamingo:
Canqal Flamingo waxaa kobcaya xoolo-dhaqato reer miyuusigga ah NGO-yo. Vierul Waa jajabka ah ee Nimrang iyo noocyada Datier de Saint-Valle. Muscat Summer, Liana iyo Kishmish Radiant waxaa lagu keenay isla xarunta cilmiga ah.
Noocyada kala duwan ee flamingos waa dhalinyaro, waxa ay bilaabeen in ay degaan beeraha canabka ah dhawaan, laakiin xiisaha ay tahay mid weyn. Waxaa lagama maarmaan ah in laga baqo bedelida, iyo in aan iibsan geedo laga soo iibiyo rasmi ah oo aan dhiiri galin kalsooni.
Waxaad dhali kartaa miraha xilliga dayrta - bisha Oktoobar, iyo guga - bisha Abriil.
Way fiicantahay haddii geedo aad ku koray weelasha, xidididdu waxay ku dhici doontaa xanuun la'aan, tan iyo nidaamka asaasiga ah si aan dhaqdhaqaaq lahayn. Isla markiiba haddii geedo leeyihiin xididada furan, si taxadar leh u baaro iyaga.
Soo saar dhaawaca oo daaweynaya Cornevitis ama Heteroauxin sida ku qoran tilmaamaha diyaarinta. Haddii wax walba ay ku fiican yihiin nidaamka asaasiga ah, wax lagama maarmaan ah lagama maarmaan.
Iyada oo la doorto meel canab ah waa in lagu soo dhawaado culeyska ugu weyn. Canab iyo goosashada waa in ay ka farxiyaan, oo qurxiyaan goobta.
Si canab si ay u siiyaan taajir ah oo tayo wanaagsan leh, waa in laga beeraa dhinaca koonfurta ama koonfur galbeed ee dhismaha, derbiga, qoryaha. Ma jecel yahay qabow, dabaylaha qoyan iyo hooska. Waa wax aan loo baahnayn in biyaha dhulka la dhigo meel ka dhow nus mitir.
Goobo iftiin ah oo cagaar ah ayaa ku haboon beerteyaal, laakiin maqnaanshahooda waxaa magdhow la siinayaa bacrimin iyo farsamooyin agrotechnical ah oo lagu daro daryeelka geedo.
Bacriminta dabiiciga ah waxaa si toos ah loogu adeegsadaa geedka marka la beeray godadka beerta, Bacriminta macdanta waxaa lagu qasi karaa ciidda marka la beeray, laakiin waxay wax ku ool yihiin oo kaliya foomka kala diri.
Ha iloowin inaad biyo u dhajisid dhirtu si fiican u daadi oo ku saydhaa carrada qalalan ama qulqulaya ciidda agagaarka sapling. Tani waxay ka hortagi doontaa burburinta dhulka iyo qalajinta wareegga gawaarida.
Waraabin dheeraad ah ayaa loo sameeyaa sidii loo baahdo.
Canab aad u qasan ayaa u dulqaadan waaya, jiran. Waa gabi ahaanba aan la aqbali karin in biyaha laga helo nooc kasta oo kaneecada.
Arjiga soo socda ee arrinta kudheerta waa lagama maarmaan ka dib saddex sano, Bacriminta macdanta, kakis fiican, codsatay sanadkiiba, iyadoo ku xiran nooca carrada.
Qaadista iyo kala jaridda
Canqal Flamingo waxay leeyihiin korriin baadiyaha ah. Calaamad isku mid ah ayaa muujisay Malbec, Pretty Woman iyo Elegant. Gooyo waa in la sameeyaa 4-6 burooyinkeeda. Warshad waa baraf u adkaysta iyo samaynta hoyga jiilaalka uma baahna.
Ilaalinta guud ee ka hortagga cudurada iyo cayayaanka
Inta badan, xashiishadu waxay sameeyaan tallaabooyin lagu ilaalinayo dhirta cudurada, iyadoon loo eegin daaweynta ka hortagga cayayaanka, laakiin habka casriga ah ee badbaadada waxay abuuri kartaa isku dhafan isku dhafan, taas oo yareyneysa tirada daaweynta. Qorshaha qiyaasidda waa sidan soo socota:
Caleemaha waxaa la gaarsiiyey dherer 10-15 cm, laga bilaabo xagta, caarada, caarada caarada, Tiovit Jet (100 gr) iyo Abig Pik (40 ml.) Halkii 10 l ayaa loo isticmaalaa. biyaha.
Daaweynta isla halabuurka 3 asbuuc kaddib marka hore.
Isla marka hore ubax, waxaan isticmaalnaa Cabrio Top (30 g.) Iyo Aktar (4 g.) 10 litir oo biyo ah.
In aan ka badneyn 12 maalmood, ka dib saddexaad. Isbedelka sarreeya ama Kvadris oo aan lahayn sunta cayayaanka.
12 maalmood gudahood. Badbaadinta ugxanta. Rodomil Gold (30 gr.), Topaz (20 gr.), Aktara (4 g.) 10 l. biyaha.
2 toddobaad kadib, daweynta ugu dambeysa ee Topaz waa suurtagal.
Doorashada siyaabaha loo ilaaliyo dhirta cudurada iyo cayayaanka waa mid aad u ballaaran, ninkii beerta oo idil wuxuu si fudud u dooran karaa midka ugu fiican. Calaamadaha cayayaanka caadiga ah ee canabka ah sida oidiyoon, noocyo kala duwan oo kallana, bakteeriyo, chlorosis, rubella iyo kansarka bakteeriyada, ayaa ku akhriya alaabooyin kala duwan oo ah boggayaga.
Waxay jecelyihiin inay cunaan shimbir canab. Habka ugu fiican ee looga hortagi karo bacaha ayaa weli ah. Maadaama biinbadu ay adag yihiin, waxay ku dhegaan bacaha.
Dhiiglayaasha ku badbaadi kara sida ay awoodaan: guga waxay ku sumoobaan kareemaha cawska leh hilibka duuban ee sumaysan, biyaha gogol leh qashinka sunta ah iyo xitaa beerta (waxay jecel yihiin wax badan), ku buufin canab oo leh iniin 200 gr. on 10 l. biyaha. Subaxda iyo fiidkii, korantada korontada waa la jeexay.
Kala duwanaanta canabka Flamingo ayaa loo qalmaa in loo dhigo tobanka miis ee miisaska miiska sare.
Waa wax aan qabyo ahayn, baraf u adkaysta iyo iska caabinta cudurada waa arrin aad u fiican, iyo ugu muhiimsan ee miiska kala duwan - dhadhanka ma aha mid ka gaaban soo jiidashada casaan, casaan aad u ballaaran, soo ururiyey shimbiro ilaa 1000 garaam.
Shaki kuma jiri karo, noocyada dhalinyaradu waxay leeyihiin mustaqbal wanaagsan. Waxaa ka mid ah noocyo aan qabyo ahayn waa in ay fiiriyaan Giovanni, Aleshenkin hadiyad iyo Delight qumman.